दु:खद खबर : लाउलाउ खाउखाउ भन्ने क’लिलै उमेरकि २२ बर्षिया विष्टले देह त्याग गरिन् ! - dautarimedia.com
दु:खद खबर : लाउलाउ खाउखाउ भन्ने क’लिलै उमेरकि २२ बर्षिया विष्टले देह त्याग गरिन् !
कैलाली टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विशाखा ले गरीन आ’त्मह’त्या गरेकी छिन । कैलाली टिकापुर नगरपालिका निवासी विशाखा विष्ट ले गए राति आ’त्म ह’त्या गरेकी छन् । आ’त्म ह’त्या को खास कारण भने अहीले खुलिसकेको छैन ।
हाल उनी टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर मा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिन । घट्ना को विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहे पनि डि’प्रेशन मा आएर आ’त्मह’त्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनकाे मृ’त्यू को खबर ले टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस मा एक दिन शो’क बिदा समेत दिइएको छ ।
उपवासको समयमा सफा लुगा लगाउनुहोस्। साथ, यो समयमा कपाल पनि काट्नु हुँदैन। यदि तपाईं साउनको उपवास राख्दा शिव कावच वा शिव चालिसाको पाठ गर्दै हुनुहुन्छ भने, उक्त समयमा कुनै पनि दोस्रो व्यक्ति
Previous: बंगलादेशमा भेटियो एक हजारवर्ष पुरानो शिवको मुर्ति
Next: कर्णालीमा पुल बनाउने गुमनाम पात्र : जसको मृ’त्युको कारण ४८ वर्षसम्म रहस्यमै